I-chalet emnandi eFeldis yokuphumla kunye nokuphumla
IFeldis yenye yeelali ezinelanga eGraubünden. Indawo emangalisayo yokuzonwabisa yendalo yabantu abathanda ukonwabela ikhefu phakathi kwendalo kunye nelali enqabileyo yeentaba.
Indawo yokuhlala ikwi-chalet entle. Indalo eFeldis ibonakaliswe ngokuzola okukhulu. Kuyo yonke indawo ungabona amasimi aluhlaza, umbono omangalisayo weentaba-indalo enyulu!
Ukuza kuthi ga ngoku, le ndlu ibiqeshwa kumntu oqeshe ixesha elide. Ngenxa yokuba aba bengasakwazi ukuza eFeldis ngenxa yezizathu zempilo, besibaqeshisa qho ngeveki ukusukela ngo-Okthobha ka-2018. Kodwa sikwavulelekile ekufumaneni umqeshi wexesha elide kule gem inefenitshala ngokupheleleyo. Amaqela anomdla amkelekile ukuba aqhagamshelane ;-)
Sinike le flethi ingqalelo enkulu kwiinkcukacha kwaye inayo yonke into eyifunayo. Iindwendwe zethu zinokungena kwiparadesi yethu encinci, zincike emva kwaye zonwabe.
Amagumbi amabini ahlukeneyo aneebhedi ezimbini eziphindwe kabini, ikhitshi-cum-igumbi lokuhlala elinendawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese, ipatio yakho entle enombono omangalisayo weentaba.
Indlu inikwe ngothando kwaye imema ukuba uchithe iiyure ezipholileyo kunye nekhefu kubuphithiphithi bobomi bemihla ngemihla.
Ayifakwanga kwixabiso: CHF 25.- ngomntu ngamnye kwiitawuli kunye nelinen yebhedi kunye nerhafu yeendwendwe). Oku ke kunokufakwa etafileni ngemali eziinkozo kwisiza. enkosi kakhulu.
Ngelishwa, izinja azivumelekanga kwiflethi. Enkosi ngokuqonda!
Ndiyakuvuyela ukunibulisa kwiparadesi yam!
I-chalet isentabeni kwaye inombono okhethekileyo weentaba. Amadlelo kunye namahlathi ajikeleze indlu kwaye apho iliso linokubona khona yindalo enyulu!